Maxaa la sameeyaa haddii taleefankaaga gacanta uusan aqoonsan kaarka SIM-ga, dhammaan xalalka | Androidsis
In moobiilkeenu uusan aqoonsanayn kaarka SIM-ka waa dhibaato naadir ah, inkasta oo tani badanaa dhacdo marar dhif ah muddo ka dib. Haddii tani shaqeyn weydo, ma heli doonno wicitaanno ama fariimo, labo ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee qalab kasta.
Asalka dhibaatadan waxay noqon kartaa ilaa seddex arimood, mid ka mid ah waxyaabaha ugu waa weyn ee ay ku noolaan karto ayaa ku jirta kaarka SIM-ka, isticmaalka oo sii socda wuxuu ka dhigayaa mid aan la aqrin karin waqtiga. Wasaqda ayaa ah qodob kale oo muhiim ah, gaar ahaan haddii aagga aan si joogto ah loo nadiifin, halka dhibaato kale ay ku dhici laheyd taleefanka laftiisa.
Waxaa laga yaabaa in kaarka SIM-ga waxyeello soo gaadhay, leeyihiin wasakh, qoyan ama aan xiriir ka samaynaynin booska, waa wax aan meesha laga saari karin waqtiga. Waxaa lagugula talinayaa inaad had iyo jeer sameyso nadiifin, jiilkii ugu dambeeyay ee casriga ah waxay lagama maarmaan noqon doontaa inaad ku jiidato nadiifinta suufka dhegaha, marka lagu daro alaabooyinka kale.
1 Afarta qalad ee ugu caansan
2 Talaabada koowaad
3 Nadiifi booska SIM-ka
4 Hubi in SIM uusan waxyeello gaarin
5 Afyare dhaawacmay
6 Demi signalka mobilada
7 Kicin shabakad otomaatig ah
8 Qalabka dib u dejinta warshadda
Afarta qalad ee ugu caansan
Waxaa jira ilaa afar fursadood oo qalad ah oo aan lagu aqoonsan kaarka SIM-ka, kan ugu horreeya ayaa ah in kaarku dhaawacan yahay marka la qabanayo, tani waa dhif iyo naadir, in kasta oo isticmaal dhici karo. Isticmaaluhu wuxuu samayn karaa nuqul kaarka ah, mid cusub oo uu yeesho ayaa ah xalka ugu fiican mararka qaarkoodna wax kharash ah ma laha.
Afka SIM-ku wuxuu badanaa dhaliyaa boodh inkasta oo xaqiiqadu tahay in xoogaa yar jiri doono, isticmaalaha ayaa noqon doona midka ay tahay inuu ku nadiifiyo maacuun ku habboon. Mid ka mid ah waxyaabaha la xidho waa suede jilicsanKuwani waxaa badanaa laga helaa goobo khaas ah, cunsur kale oo muhiim ah ayaa noqon kara suufka cudbiga.
Dhibaatada kale ee aan aadka u badnayn waa haysashada biin jaban, ma aha mid la tuuri karo, laakiin mararka qaarkood way fiicnaan laheyd in la fiiriyo, tan la tasho khabiir dayactirka ah. Tan afraad iyo tan ugu dambaysa ayaa laga soo dheegtay dhibaatada software-ka, tani waxay ka dhigaysaa inaynaan aqoonsan kaarka SIM-ka marar dhif ah.
Mid ka mid ah tallaabooyinka ugu horreeya ee lagu ogaanayo haddii sababtu tahay in la arko haddii la saarayo oo la dhigayo SIM-ka resets mar kale, tani waxay badanaa ka shaqaysaa xaalado badan. Haddii kale, waa waqtigii la eegi lahaa beddelaadyo kale ka hor inta aanad bixin kaarka.
Ka gaabinta aqoonsiga kaarka SIM-ga markii aad ka saareyso mobilada oo aad dib u gelineyso waxay noqon kartaa dhowr sababood, mid waa in xiriirku xumaado ama dusha sare uu leeyahay boodh Midka koowaad waa midka ugu dhib badan, gaar ahaan markay tahay dayactirka, halka kan labaadna uu maro nadiifin yar.
Isticmaal cirbad ama soo qaad yar (midka inta badan ku soo dhaca sanduuqa taleefanka warshadda) si looga soo saaro booska Micro SD, ka saar SIM-ga oo ku siiso maro jilicsan xagga hoose. Dib-u-geliso mar nadiif ah, haddii aan la aqoonsan, waxaa fiican inaad dib u bilowdo qalabka.
Nadiifi booska SIM-ka
Mid ka mid ah siyaabaha loogu shaqeeyn karo mar kale waa in la nadiifiyo SIM-ka iyo booska, waa mid ka mid ah sababaha ugu waawayn ee kaarku xumaado. Isku soo wada duub boodhka iyo sii wadida isticmaalka SIM-ka ayaa ka dhigaysa mid aan la aqoonsan, sidaa darteed waa ku habboon tahay in ugu dambeyn la nadiifiyo.
Nadiifinta in la sameeyo waa kuwan soo socda, waxaa lagama maarmaan ah in la xasuusto in had iyo jeer leh jajab jilicsan iyo ul suuf ah, kan ugu dambeeya waa inuu ahaadaa mid adag. Biinanka waa in lagu sifeeyaa si taxaddar lehiyadoo aan la xoqin haddii ay horeyba u jirtay, maadaama tani ka dhigeyso mid aan la aqrin karin.
Hadda ugu dambeyntii, ku nadiifi booska SIM suufkaXusuusnow inay adag tahay sida ugu macquulsan si aysan timo uga tagin. Marka aad nadiifiso SIM iyo booska labadaba, kaarka dib ugu soo celi taleefanka oo hubi in wax waliba si sax ah u shaqeeyaan sidii bilowgii.
Hubi in SIM uusan waxyeello gaarin
Dhibaatooyinka waaweyn waxaa ka mid ah in kaarka SIM-ga uu shaqeyn waayoTani waxay ka dhigi doontaa moobilku inuusan ogaan karin calaamadda oo ay tahay in lagu beddelo mid kale. Nuqul ka mid ah hawlwadeenku wuu xallin doonaa tan kharashkuna wuxuu ku xirnaan doonaa mid kasta, adeeggu wuu kala duwanaan karaa iyadoo ku xiran hawlwadeenka la doortay waqtigaas.
Qaar badani waxay u arkaan nuqulku inuu yahay nuqul sax ah oo kaarka ah, laakiin tani waxay qaadan doontaa waqti u dhexeeya dalbashada iyo wadaha oo lagu haysto dukaanka. Tusaale ahaan, Vodafone waxay ku kacdaa qiyaastii 5 euro oo loogu talagalay soo-saarista kaarka, Movistar iyada oo loo marayo degelkeeda waxay muujineysaa in qiimaha uu yahay 14,5 euro.
Yoigo wuxuu inta badan ka qaadaa lacag labalaab ku dhow 7,26 euro (VAT ayaa lagu daray), Orange 5 qof ayuu ka qaadaa iyo 12 euro haddii aad shirkad ka tahay soo-saarista. Simyo waxay macaamiisha ka qaadaa qiyaastii 7 euro, qadar la mid ah tan ay soo dallacday Yoigo, laakiin waxay ku sameysaa qaddar nadiif ah.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu halista badan ayaa ah kan booska dhaawacanXaaladdan oo kale, waxaad isku dayi kartaa inaad gacanta ku dayactirto, dhammaantoodna waxaad ku haysataa warqad u dhexeysa SIM iyo booska. Xiriirka warqadda ayaa ka dhigi doonta mid la aqbali karo oo si hagaagsan u shaqeyn doonta, marka tan waa la sixi karaa inta aad ka akhrisanaysid oo aadan ka gaabin.
Haddii furitaanka SIM-ka uu jabo, suurtagalnimada kaliya ee lagu dayactirayo waa iyada oo loo marayo adeegga farsamada, khabiir ku takhasusay arrimaha ayaa go'aamin doona haddii ay habboon tahay in la dayactiro Saxanka waa la beddeli karaa, laakiin mararka qaarkood waa la cabbiri karaa hel qalab cusub maadaama ay suurta gal ahayn in la saxo.
Qiimaha dayactirka booska SIM wuxuu u dhexeeyaa 40 ilaa 80 euroWaxay kuxirantahay sameynta iyo qaabka ay tahay, inlaga hagaajiyo kharash badan. Afyare waa lagama maarmaan, gaar ahaan marka aad geliso SIM ah in ay leeyihiin labada wicitaan, fariimaha iyo xiriirka internetka la hawlwadeenka la doortay. Weydiiso miisaaniyad marka hore, dhammaan kahor xitaa farsama yaqaanku wuxuu go'aansadaa inuu ku siiyo qiime adiga oo aan hubin waxa ay tahay.
Demi signalka mobilada
Mid ka mid ah xulashooyinka kala duwan ee la fulinayo markii wax walba fashilmaan ayaa ah in la joojiyo signalka moobaylka, waxaan kaliya u baahanahay inaan galno liiska qarsoon ee taleefannada oo dhan. Markii la hawlgaliyo, waxaan sugi karnaa ugu yaraan waqti caqli gal ah ka hor inta aannan dib u hawlgelin.
Haddii aad rabto inaad ka joojiso calaamadda moobaylka, geli nambarka * # * 4636 # * # oo sug sugitaanka menu-ka, maxaa yeelay waxay muujin doontaa "Deactivate signal mobile", dhagsii haa. Hadda sug ilaa 5 daqiiqo ka hor intaadan dib u dhaqaajinin si loo arko bal inay u aqoonsan tahay kaarka SIM-ka sidii caadiga ahayd iyo in kale.
Haddii aadan aqoonsan, dhibaatadu way ka sii weynaan kartaa, Sababtaas awgeed ayaannu u tuuraynaa waxyaabo, iyaga ka mid ah inay si gaar ah u tahay software-ka terminal-ka. Dib-u-bilaabid marka laga reebo calaamadaha moobiilka waa wax kale oo la sameeyo haddii aad aragto inaad isku dayday inaad sameyso adoo adeegsanaya lambar ka socda qaybta gudaha ee mobilka.
Kicin shabakad otomaatig ah
Mid ka mid ah xuduudaha aan marar badan iska indhatirno waa in ay tahay dhibaato ay sabab u tahay shabakadda, hawlwadeenka sida caadiga ah by default shidaa hab network otomaatiga ah. Way ku habboon tahay in la arko haddii tani ay tahay qaladka gaarka ah iyo haddii ay tahay in la hagaajiyo si loo saxo waxa madax-xanuun u ah dad badan.
Waxay kuxirantahay qaabka taleefankaaga tani way isbadali doontaa, in kastoo aysan sidaa u dhib badnayn oo ay noqoto xulasho gudaha ah ee mid kasta oo ka mid ah hawl wadeenada taleefanka. Shabakada mobilada waa muhiim inaad xiriir la yeelatid kuwa kuugu dhow, samee taleefan iyo waxyaabo kale oo badan.
In Android waxaa loo sameeyaa sida soo socota:
Tag Settings ka dibna shabakadaha moobaylka
Markaad gudaha gasho, raadso xulashada Habka Shabakadda
Gudaha LET / WCDMA / GSM waxay awood siineysaa «isku xirnaanta otomaatiga ah» oo sug in la ogaado, haddii aad horey u awood u laheyd in la joojiyo oo dib loo howlgeliyo daqiiqad ka dib si loo soo celiyo doorashadan, tani waxay hagaajin kartaa cilladda aqoonsiga SIM
Waxay u badan tahay inay tahay tan ugu xiisaha badan, laakiin waa tallaabada ugu dambeysa ee ay tahay in la sameeyo haddii dhammaan waxyaabaha kor ku xusan aysan ka shaqeynayn taleefanka casriga ah ee kugu soo dhacaya. Dhibaatada qalabka iyo softiweerka mararka qaarkood waxay leedahay xal, ama nadiifinta aagga, sameynta dib u dejinta xulashooyinka, koodh ama goobaha.
Waxa ugu horreeya ee tan la sameeyo waa in la badbaadiyo wax kasta oo muhiim ah, annaga ayaa ku isticmaalnay Terabox, aalad ku siinaysa Terabyte disk ah si aad u keydiso sawirrada iyo fiidiyowyada. Si aad u badbaadiso xiriiradaada iyo kuwa kale waxaad isticmaali kartaa boostadaada iyo Drive-ka, oo ah laba qalab muhiim ah oo si fudud loo isticmaali karo.
Si aad dib ugu cusbooneysiiso qalabka talaabadan ku qaado tallaabo tallaabo
Qalabka guji Settings oo sug dhammaan xulashooyinka in la raro
Hadda raadi xulashada Nidaamka oo guji
Qalab badan ayaa dib u dejiya warshad Waxay ku darayaan "Backup", marka nidaamka waa inaad heshaa xulashadan, Huawei tusaale ahaan waxay uga muuqataa Nidaamka iyo cusbooneysiinta
Nidaamka / Nidaamka iyo cusbooneysiinta guji "Dib u celi" oo guji "Dib u soo celi taleefanka" si aad u bilowdo shaqada, xusuusnow inaad haysato ugu yaraan qayb muhiim ah oo batteriga ugu yaraan ah 70% ama ka sareeya
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Maxaa la sameeyaa haddii taleefankaaga gacanta uusan aqoonsan kaarka SIM-ga, dhammaan xalalka
6-da kulan ee ugu fiican kaararka Android